विश्वकप फुटबलमा कुन टिमले कति पुरस्कार पाउँछन् ? – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकप फुटबलमा कुन टिमले कति पुरस्कार पाउँछन् ?
काठमाडौं, असार ३१ । विश्वकप फुटबल सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो । प्रत्येक चार वर्षमा हुने यो प्रतियोगिताको २१औं संस्करण आज रुसमा सकिँदै छ । एक महिनासम्म चलेको विश्वकप यो पटक पनि निकै रोमाञ्चक रहेको छ ।
अझैं रोमाञ्चक त तब हुने छ जब फाइनल खेल शुरु हुने छ । अब फाइनल खेल हुन समय धेरै छैन । नेपाली समयअनुसार ८ः४५ बजे फ्रान्स र क्रोएसिया उपाधिका लागि भिड्ने छन् । जसले उपाधि जित्छ उसले इतिहास रच्ने छ । यति मात्रै होइन उसले पाउने पुरस्कारको राशि पनि अचम्मित पार्ने किसिमको छ ।
सबैलाई चाँसो हुन सक्छ यति ठूलो प्रतियोगितामा खर्च कति होला ? अर्थात टिम र उपाधि जित्नेले कति पुरस्कार पाउँलान् ? यस्ता तपाइमा खुल्लदुली उब्जिएका छन् भने मेटाउने कोशिस गर्ने छौं । साँचो केहो भने विश्वकपमा सहभागी हुने ३२ वटै टिमले नगद पुरस्कार पाउँछन् । त्यसबाहेक सबै टिमलाई प्रति टिम १५ लाख डलर तयारी खर्च पनि दिइन्छ ।
विश्वकपमा सहभागी भई समूह चरणबाटै बाहिरिने वा समूहको एउटा पनि खेल नजित्ने टोलीले ८० लाख डलर पाउँछन् । तयारी खर्च १५ समेत जोड्दा यो रकम ९५ लाख अमेरिकी डलर हुन आउँछ । यसपटक इजिप्ट, साउदी अरेबिया, मोरक्को, इरान, पेरु, अष्ट्रेलिया, नाइजेरिया, आइसल्याण्ड, सर्विया, कोष्टारिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, पानामा, ट्युनिसिया, सेनेगल र पोल्याण्ड समूह चरणबाटै बाहिरिए । उनीहरु सबैले १५ लाख तयारी खर्चसमेत गरी जनही ९५ लाख अमेरिकी डलर पाएका छन् ।
विश्वकपको अन्तिम चार स्थानमा रहने टोलीले फरक फरक पुरस्कार पाउनेछन् । सेमिफाइनलमा पराजित भएका दुई टोलीले तेस्रो स्थानका लागि खेलेका थिए । जसमा इंग्ल्याण्डलार्इ बेल्जियमले पराजित गरेको थियो । त्यसैले बेल्जियमले तेस्रो पुरस्कारस्वरुप २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पाएको छ भने इंग्ल्याण्डले २ करोड २० लाख डलर पाएको छ । यसमा १५ लाख तयारी खर्च समावेश गरिएको छैन ।
यसपटकको विश्वकप फाइनलिष्ट टोलीका लागि पुरस्कारबापत ६ करोड ६० लाख डलर वितरण गरिनेछ । विश्व विजेता टिमले ६ केजी सुनको ट्रफीका साथै ३ करोड ८० लाख डलर पुरस्कार पाउनेछ । उपविजेता टोलीले २ करोड ८० लाख डलर पुरस्कार पाउनेछ । १ करोड डलरको फरक रहेको विश्वकप फाइनलमा फ्रान्स र क्रोएसिया भिड्दैछन् ।
रुस विश्वकपमा पुरस्कार राशी अघिल्लो संस्करणमा भन्दा केहि वृद्धि गरिएको हो । अघिल्लो संस्करणको विजेता जर्मनीले ३ करोड ५० लाख डलर पुरस्कार पाएको थियो । कतारमा सन् २०२२ मा हुने विश्वकपमा पनि पुरस्कार रकम बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
खेलाडीले चाँहि कति रकम पाउँछन् ?
विश्वकपमा सहभागी मुलुकका खेलाडीले कति कमाउँछन्रु यो पनि सबैको चासोको विषय हो । फिफाले खेलाडीलाई नै तोकेर पुरस्कार वा सहयोग रकम प्रदान गर्दैन । तर, फिफाबाट सम्बन्धित मुलुकका संघलाई आएको रकम संघले खेलाडीका लागि पनि छुट्याउँछ ।
अघिल्लो संस्करणको विश्व विजेता जर्मनीका खेलाडीले प्रतिव्यक्ति ४ लाख ८ हजार डलर बोनस पाएका थिए । त्यसबाहेक आफ्ना प्रायोजकहरुबाट पनि उनीहरुलाई पैसा असुल्न छुट हुन्छ । यद्यपि क्लबबाट आउने पारिश्रमिकभन्दा देशका लागि खेल्दा आउने पारिश्रमिक थोरै हुन्छ ।
त्यसकारण फिफाले देशलाई मात्र होइन, खेलाडी आवद्ध क्लबलाई पनि रकम दिन्छ ।विश्वकपमा यसपटक कूल सात सय ३६ खेलाडी कुनै न कुनै क्लबमा आवद्ध थिए । जसमा फिफाले सबैलाई गरेर सात करोड डलर छुट्याएको छ । यसको अर्थ क्लबले एक दिनको २ हजार ८०० अमेरिकी डलर पाउँछन् । -एजेन्सी